प्रधानमन्त्री Rajdhani News प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता सुरू भएको छ। बालुवाटारमा भएको भेटमा नेकपाभित्र जारी विवाद समाधानका
असार २३ गते, २०७७ ११:४३ मा प्रकाशित
दोस्रो कोरोना संक्रमीत निको भएपछि चिकित्सकलाई यसो भने प्रधानमन्त्रीले
देस्रो कोरोन संक्रमीत निको भएपछि चिकित्सकलाई यसो भने प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित युवतीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीलाई बधाई दिएका छन् । आज ट्वीट गर्दै
वैशाख ६ गते, २०७७ १५:४४ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण : कति भयो त खर्च ?
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अरू साधारण बिरामीलाई जति नै खर्च लागेको छ । अस्पतालका अनुसार प्रत्यारोपण र उपचारका लागि पाँच लाख खर्च भएको अस्पतालले जनाएको छ । सो खर्चको बिल अस्पतालले
चैत १ गते, २०७६ ०७:५४ मा प्रकाशित
अब के गर्छन प्रधानमन्त्री ?
उनले लिने निर्णयले नेकपाको आन्तरिक राजनीति, पार्टीको तथा सरकारको भबिष्य निर्दिष्ट गर्ने देखिन्छ । उनको निर्णय सोचबुझपूर्ण भएन भने पार्टी धरापमा पर्ने प्राय निश्चित नै छ ।
फागुन १६ गते, २०७६ २०:०३ मा प्रकाशित